बधाई ! साफ च्याम्पियनसिप – मनिषको गोलमा नेपालको विजयी सुरुवात । - Thulo khabar
बधाई ! साफ च्याम्पियनसिप – मनिषको गोलमा नेपालको विजयी सुरुवात ।
काठमाडौं : युवा अ’ट्याकर मनिष डांगीको निर्णायक गोलमा नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा सुखद् सुरुवात गरेको छ ।
शुक्रबार माल्दिभ्सको मालेमा भएको साफको दोस्रो खेलमा नेपालले आयोजक टोलीलाई १–० गोल अन्तरले परा’जित गरेको हो ।
नेपालको जितमा मनिष डांगीले निर्णायक गोल गरे । नेपाल यू–१९ टोलीका सदस्यसमेत रहेका मनिषले खेलको ८५ मिनेटमा गोल गरेका हुन् । जुन गोल काउन्टरमा सम्भव भएको थियो । यसअघि मनिष स्ट्रा’इकर नवयुग श्रेष्ठको स्थान दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेको थिए ।
राष्ट्रिय टोलीको लागि यो मनिषको दोस्रो गोल हो । यसअघि उनले पहिलो गोल इराकवि’रुद्ध गरेका थिए । जुन खेल उनको डेब्यु’समेत थियो । यससँगै नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्सवि’रुद्ध पहिलो जित निकालेको छ ।
यसअघि पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा समाप्त भएको थियो । दुबै टोलीले केही अवसर बनाए पनि सदु’पयोग भने गर्न सकेनन् । खेलमा नेपालको तुलनामा घरेलु टोली माल्दिभ्सले दबाब बनाएको थियो ।
जितसँगै नेपालले सिंगल राउण्ड रोबिनको लिगमा महत्वपूर्ण तीन अंक हासिल गरेको छ । अब नेपालले दोस्रो खेलमा १८ असोजमा श्रीलंकाको सामना गर्नेछ । आज नै भएको पहिलो खेलमा श्रीलंका बंगलोदशसँग १–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो ।